တရုတ်စျေးပေါသောသံမဏိကုန်လှောင်ရုံပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ဂန္ထဝင်အုပ်စု
သံမဏိကိုယ်ထည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ အဓိကအားဖြင့်သံမဏိကော်လံ၊ သံမဏိရောင်ခြည်နှင့် purlin တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဓိကအဆောက်အအုံမှဖွဲ့စည်းထားသောအဆောက်အအုံအမျိုးအစားဖြစ်သည်
သံမဏိကိုယ်ထည်သည်သံမဏိအလုပ်ရုံ၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ သံမဏိအလုပ်ရုံ၏ခေါင်မိုးနှင့်နံရံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးချ
အတူတူစုဝေးသည့်အခါထပ်လိမ့်မည်ဟု panel ၏စတိုင်များ, အဘယ်သူမျှမဖွင့်ထားခဲ့ပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်သံမဏိဘောင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုသီးခြားခွဲထုတ်နိုင်သည်
စက်မှုမဟုတ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း။ သံမဏိအမျိုးအစားအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သည့်သံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းကိုခွဲခြားနိုင်သည်
၁။ အဓိကသံမဏိကိုယ်ထည်: welded H steel, hot-roll H H သံမဏိ
2. Purlin: c-type အမျိုးအစားသံမဏိသို့မဟုတ် Z-type သံမဏိ
၃။ ခေါင်မိုးနံရံ - နံရံသွပ်၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပြားသို့မဟုတ်ဖန်သားမွှေးကွိုင်နှင့်သွပ်ထားသောနံရံ
၄။ နံရံ panel - သွပ်ပြားသို့မဟုတ် sandwich panel
5. လည်စည်းဘား: welded- ပတ်ပတ်လည်ပြွန်
6. သတ္တုအထိမ်းအချုပ်: သံမဏိပတ်ပတ်လည်
၇။ Column Brace and lateral brace - ထောင့်သံမဏိသို့မဟုတ် H အပိုင်းသံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိပိုက်
8. ချီစက်: 3T-100T
၉ ။ ထောင့်သံမဏိ
၁၁ ။ မြောင်း - သံမဏိသို့မဟုတ်သွပ်သွင်းခြင်း
12. Down ပိုက်: UPVC ပိုက်
13. Door: အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လျှောတံခါးသို့မဟုတ်လှိမ့်သောတံခါး
၁၄။ ဝင်းဒိုး - အလူမီနီယမ်အလွိုင်း ၀ င်းဒိုးသို့မဟုတ် PVC ၀ င်းဒိုး
ကျနော်တို့ quotaiton မပေးမီ parameter သည်အောက်တွင်အတည်ပြုသင့်ပါတယ်
အလျား * အကျယ် * အမြင့် (ရှိလျှင်သင့်ဒီဇိုင်းကိုကြိုဆိုပါ)
ကျွန်ုပ်တို့မှာကြားလွှာကိုအတည်ပြုပြီးသောအခါသင့်ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သင့်အားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယားကိုပေးပါမည်။ သင်၏အတည်ပြုချက်အတွက်ဆိုင်သို့သင့်ထံလာပို့ပေးပါမည်။ ထို့နောက်အသေးစိတ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်ပါမည်။ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဓာတ်ပုံကိုအဆင့်တစ်ခုစီတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
ကုန်ပစ္စည်းအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိပြားကိုသံမဏိကိုယ်ထည်နှင့်ဘောင်အားလုံးနှင့်ခေါင်မိုး / နံရံပစ္စည်းများ (option ကိုလုပ်နိုင်သည်) ကို loading လုပ်ရန်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ နောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများသည်အချိန်မီရွက်လွှင့်မည်ဟုအာမခံရန်ထုံးစံဖောက်သည်များ (တရုတ်ဘက်ခြမ်း) ကိုပြုလုပ်သည်။
စက်မှုသွန်း Prefab ဂိုဒေါင်